Kulankii golaha wakiillada Puntland ee maanta oo aan qabsoomin – Kalfadhi
Kulankii golaha wakiillada Puntland ee la filayay in ay maanta yeeshaan ayaa baaqay. Waxaa kulanka dib loo dhigay ilaa sabtida sida ay Kalfadhi u xaqiijiyeen qaar ka mid ah xildhibaanadu.
Lama sheegin sababta rasmiga ah ee dib loogu dhigay.
Golaha ayaa fasax ku kala maqnaa teer 17kii febraayo, in kastoo uusan weli xirmin kalfadhiga 43aad ee golaha. Xildhibaanada oo badankood maqnaa ayaa dib ugu soo noqonaya caasimada.
Waxaa qorshuhu yahay in xukuumaddu golaha hor keento miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2019, si ay uga doodaan deedna u meel-mariyaan.
Baarlamanka ayaa bishii janaayo waxay si deg deg ah u ansixiyeen miisaaniyadda kooban oo saddex bilood ah, si ay xukuumadu ugu sii shaqayso.
Gudoomiyaha golaha wakiillada Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo-daareed, ku xigeenkiisa labaad Ismaaciil Maxamed Warsame iyo qaar ka mid ah baarlamanka ayaa shalay dib ugu soo noqday Garowe kadib safar ay mudo ugu maqnaayeen Djibuuti iyo Muqdisho